परिवार reunification - संयुक्त राज्य अमेरिका आफ्नो परिवार ल्याउन | USAHello | USAHello
कसरी परिवार reunification काम गर्छ?
तपाईं विगतमा भित्र शरणार्थी रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश भने2वर्ष वा विगतमा भित्र asylee स्थिति प्रदान गरियो2वर्ष, के तपाईं "व्युत्पन्न" शरणार्थी वा asylee स्थिति प्राप्त गर्न केही परिवारका सदस्यहरूले लागि लागू हुन सक्छ. यो तिनीहरूले आफ्नो परिवार को एक भाग हो किनभने तिनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक शरणार्थी बन्न सक्छ भन्ने हो. केवल केहि परिवारका सदस्यहरूले "व्युत्पन्न" शरणार्थी बन्न सक्छ: आफ्नो पति (पति वा पत्नी) वा छोराछोरीलाई (अविवाहित र अन्तर्गत 21 तपाईं पहिलो शरण वा शरणार्थी स्थिति लागू गर्दा).
तपाईं पनि परिवारका सदस्यहरूले शरणार्थी रूपमा पहिले नै पहिचान हो जो अमेरिका मा तपाईँ सामेल गर्न लागू गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईंले ती कार्यक्रम को या त को लागि योग्य भने छैन र अहिले अमेरिकी नागरिक, तपाईं पनि आफ्नो परिवार अमेरिका बसाइँ सर्ने छ नियमित आवेदन पूरा गर्न सक्नुहुन्छ.
अनुरोध गर्न आफ्नो पति गर्न वा छोराछोरीलाई पारिवारिक Reunification कार्यक्रम अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका मा तपाईँ सामेल, तपाईं गर्न के भनिन्छ पर्छ एक “प्रमुख” शरणार्थी वा asylee. यो Resettlement को अमेरिकी कार्यालय मार्फत संयुक्त राज्य अमेरिका आधिकारिक शरणार्थी स्थिति प्राप्त र आएको व्यक्ति थिए भन्ने हो. तपाईं विगतमा भित्र शरणार्थी रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश हुनुपर्छ2वर्ष वा विगतमा भित्र आश्रय प्रदान गरिएको छ2वर्ष. तपाईं शरणार्थी वा asylee स्थिति रहन पर्छ वा न्यायसंगत स्थायी निवासी भएका छन् (हरियो कार्ड प्राप्त).
तपाईं पनि आफ्नो पति को लागि वैवाहिक एक शपथ फाइल गर्न योग्य हुन सक्छ, बच्चा (अविवाहित, अन्तर्गत 21), वा आमाबाबुले. वैवाहिक को शपथ छन् नजिक नातेदारहरु संग शरणार्थी र asylees मिलन हुनु गर्न प्रयोग रुप हो पहिले नै शरणार्थी हुन कटिबद्ध तर संयुक्त राज्य अमेरिका बाहिर छन्. वैवाहिक को शपथ रेकर्ड पारिवारिक सम्बन्ध बारे जानकारी. को शपथ नातेदार लागि आवेदन प्रक्रिया अमेरिकी शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम मार्फत शरणार्थी रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्न योग्य हुन सक्छ जो सुरु गर्न पूरा हुनुपर्छ. तपाईं अमेरिका आउने पाँच वर्ष भित्र यो अनुप्रयोग पूरा गर्नु पर्छ. फाइल गर्न योग्य हालको nationalities जानकारी को लागि, देख्ने राज्य को अमेरिकी विभाग, जनसंख्या को ब्यूरो, शरणार्थी & माइग्रेसन.
विदेशी नातेदार लागि आवेदन
स्थायी निवास विदेशी स्थिति वा जो संग शरणार्थी अमेरिकामा भएको पाँच वर्षभन्दा spouses तर्फबाट लागू गर्न सक्नुहुन्छ, बच्चाहरु, आमाबाबुले, र भाइ बहिनी प्रयोग फारम म-130. यो प्रक्रिया थप समय लाग्न र माथि दुई कार्यक्रम भन्दा गाह्रो हुन सक्छ. कृपया USCIS पढ्न अमेरिकी नागरिक को परिवार थप जानकारीको लागि पृष्ठ.
जो परिवारका सदस्यहरूले योग्य संयुक्त राज्य अमेरिका आउन छन्?
तपाईं गर्न कागजात पूरा गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो पति अमेरिकी आउन, के तपाईं शरणार्थी रूपमा अमेरिकी आउनुअघि विवाह गर्न थियो या अमेरिकामा शरण प्रदान गरियो. कृपया USCIS भ्रमण शरणार्थी & Asylee Spouses थप जानकारीको लागि पृष्ठ.
आफ्नो बच्चा गर्भधारण गर्न थियो (यो आमा पहिले नै गर्भवती थियो मतलब) या तपाईं एक शरणार्थी रूपमा प्रवेश वा आश्रय प्रदान गरियो अघि जन्म. कृपया USCIS भ्रमण शरणार्थी & Asylee बच्चाहरु थप जानकारीको लागि पृष्ठ.
तपाईं शरणार्थी वा asylee स्थिति रहन वा स्थायी निवासी भएका छन् (हरियो कार्ड प्राप्त). तपाईंले पहिले नै भएका छन् भने एक एशिया |. प्राकृतिक माध्यम नागरिक, तपाईं एक नातेदार लागि व्युत्पन्न शरणार्थी वा asylee स्थिति प्राप्त गर्न आवेदन गर्न सक्दैन. तर, तपाईं अझै पनि संयुक्त परिवार बसाइँ सर्ने गर्न सहयोग गर्न सक्षम हुन सक्छ.
क्रममा शरणार्थी रूपमा अमेरिकी आउन आफ्नो पति वा छोराछोरीको लागि लागू गर्न, तपाईं पूरा गर्नुपर्छ फारम म-730, वा शरणार्थी / Asylee सापेक्ष आवेदन. यो फारम फाइल निःशुल्क छ. के तपाईं लागू गर्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कानुनी कागजात समावेश गर्न हुनेछ. जब तिमी डाउनलोड फारम म-730, को पढ्न पनि निश्चित हुन आधिकारिक USCIS फारम म-730 जानकारी र दाखिला लागि निर्देशन फारम म-730.
कानुनी प्रकारका पूरा धेरै गाह्रो हुन सक्छ. तपाईंको resettlement एजेन्सीको मदत माग्न वा फेला एक वकील वा कानुनी संगठन आप्रवासी मद्दत गर्छ कि. मार्फत धेरै भाषामा reunification बारेमा थप जान्न IRAP.
यो पृष्ठमा जानकारी आउँछ राज्य को अमेरिकी विभाग, USCIS, र अन्य विश्वसनीय स्रोतबाट. यो निर्देशन लागि निमित्त र सकेसम्म अक्सर अद्यावधिक. USAHello कानुनी सल्लाह दिन छैन, न त हाम्रो सामाग्री इरादा कुनै पनि कानुनी सल्लाह रूपमा लिइने गरिन्छ. तपाईँलाई नि: शुल्क वा कम लागत वकील वा कानुनी सहायता खोजिरहेको भने, हामी तपाईंलाई मदत गर्न सक्छ निःशुल्क र कम लागत कानुनी सेवा पाउन.